Maxkamadda ICJ oo diiday dalabkii Kenya, islamarkaana qaadaysa dacwadii Badda waqtigii loo balamay | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Maxkamadda ICJ oo diiday dalabkii Kenya, islamarkaana qaadaysa dacwadii Badda waqtigii loo balamay
The Hague (SONNA)- Ra’iisul Wasaare kuxigenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ( Khadar) ayaa shegay in Maxkamadda Caalamiga ee ICJ ay laashay dalabkii Kenya ee ahaa in dib loo dhigo dacwadda Badda ee kala dhaxeeysa Soomaaliya.
Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul Wasaare kuxigenka dalka oo Shir Jaraa’id qabtay ayaa waxaa uu sheegay in Maxkamadda ICJ ay si cad u shaacisay in aysan aqblayen in mar kale dacwadda dib loo dhigo, sidaas dareedeedana ay u diyaar garoobaan labada dal.
“ Maxkamadda waxa ay go’aan shalay ku gaaray in dhageysiga dacwadda oo ay horayna u muddeysay haseyeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo, in aan la aqbaleynin in markale dib loo dhigo. Sidaa daraaddeed dhinacyadu ay u soo diyaargaroobaan 15-19 bisha March ee inagu soo aaddan Insha alla ayuu yiri” Mahdi Guuleed.
Waxaa uu hadalkiisa uu in taasi ku daray in dowladda Soomaaliya dhinaceeda ay u diyar garoowday ka qeyb-galka qaadista Dacwadda, hadii looga qyeb-galayo Aalada Zoomka ee dhinaca Internet-ka ama Xubno loo dirayo Maxkamadda.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare kuxigenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ( Khadar) ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay isku kalsoon tahay, waxana uu Shacabka ugu baaqay inay u so duceeyaan.
Maalmo ka hor ayaa dowladda Kenya waxaa ay ka codsatay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ in markii afaraad dib loo dhigo kiiska dacwadda Badda, hayeeshee dowladda Soomaliya ay Maanta sheegtay in Maxkamadda dalabkaas ay laashay.
Previous articleWasaaradda Caafimaadka X.F.S oo faahfaahin ka bixisay xaaladahii ugu dambeeyay ee COVID-19
Next articleCiidanka Xoogga dalka oo howlgal ka dhan ah kooxda nabad-diidka ka fuliyay Gobolka Gedo